Mabasa Akanakisisa Emunharaunda muPuerto Rico
Zvechokwadi, unogona kupedza zvakashata uye unofarira chero zororo chero ipi zvayo mwoyo wako unoda kana iwe uchiuya pachitsuwa ichi, asi zvakare zvakanaka kuti uzive kuti haufaniri kuputsa bhangi kuti uve nenguva yakanaka. Ichokwadi, iwe une chisarudzo chako chezviitiko zvekusununguka muPuerto Rico kuti ufare. Heano maitiro angu anofarira kushandisa mari zvachose uye kuve nekukurumidza kuchiita.
Uyu ndeavo vanoda-nyanzvi mune zvimwewo. Kana iwe uine ruzivo (kana kuchenjera) zvakakwana kuti uve muChechi yeSan Juan paChipiri chekutanga chemwedzi wose munguva yepamusoro (February kusvika May uye Septemba kusvika kuDecember), pfuurira kunze kweguta kweusiku hwekuonga nekudhira waini . Mune magira makumi maviri (uye ivo vari pakati pezvakanakisisa pachiwi) kuchengeta mikova yavo yakazaruka munguva dzeusiku huno, vachikumbira munhu wose kuti atarise maunganidzwa avo. Mhepo yakasanganiswa inongova musanganisi wemuvuvhizi wakasununguka uye wekutengesa. Dzimwe nguva vatambi vanofambisa vanoenda kumigwagwa kuti vawedzere kugunzva kwechinhu chakanaka kusvika manheru.
Maguta ose muPuerto Rico ane mutsvene, uye vatsvene vose vanokudzwa kamwe pagore muMutambo Patronal , kana kuti "Patron Saint Festival." Wedzera huwandu hwemaguta ari pachitsuwa chacho, uye iwe uri kutaura nezvemutambo vhiki imwe neimwe. Kanda mukuti bato racho rinowanzoenderera kwemazuva, uye iwe uchaziva kuti iyo nzira inotyisa yekubata mimhanzi, tsika, kutamba, uye kunakidzwa kwemukati. Izvo zvinosununguka zvachose (kunze kwezvokudya, zvakasununguka, zvandinonyatsorumbidza). Iye zvino, kusvika kune chero guta riri kutambira mutambo waro ndechimwe nyaya, asi público inofanira kuita zvisiri izvo pasina kukuvadza chikwama chako.
Kutaura nezvemhemberero, chikuru pane iyo yose inowanikwa muPonce: The Ponce Carnival ndeyegore rega-hausi-kunze kwese.
Bacardi's distillery muCataño (iyo yakakura zvikuru yenyika inonzi rum distillery, ini ndinogona kuwedzera), inongova kutuka kwebwe kubva ku Old San Juan, inovhura kune vashanyi gore rose. Rwendo rwekutora runokutora kuburikidza nehutano hwekuisa ramu pachiwi uye kubva kwaBacardi. Iwe unosvikawo kuti uedze unhu hwako hwakanaka, uye, chokwadi, unowana zvinyorwa zvinonaka. Mafambi acho anozadza mangwanani, saka tumira mberi usati waenda.
Nenzira, kana uri kushandisa sangano rekushanyira kushanyira Casa Bacardi, iwe uchabhadhara madhora makumi matatu, asi vanhu vakanaka paBardi havabhadhari mazendo avo. Icho chinyengeri ndechokutora chikepe kubva kuguva muSan San Juan (pamutengo we $ 0.50) uye wobva watora teksi kufekitari (iyo ichakugadzirisa iwe madhora mashomanana).
Tres Palmitas Beach. Michael DeFreitas / Getty Images
Iwe haugoni kukakavadzana nekanako, mukurumbira, uye mutengo wekupindirwa kwemahombekombe ePuerto Rico. Chimwe chezvinhu zvayo zvakanyanya kunaka, zvitsuwa zvechitsuwa (zvinopfuura makiromita makumi maviri nemaviri kubva kwavari!) Ndezvokukoka kwemamiriyoni evashanyi. Cherechedza, zvisinei, izvi hazvizi dzose mabhangi dzakasununguka. Panzvimbo dzomumhenderekedzo dzevanhu, dzinonzi Balnearios , iwe unofanirwa kubhadhara mari yekupaka, asi mukudzoka iwe unowana zvinhu zvakadai sevarindi vekuchengetedza, nzvimbo dzepikiniki, uye nzvimbo dzekugara. Zvizhinji zvezvitsuwa zvechitsuwa chacho, zvisinei, hazvina kunyatsooneka, nzvimbo dzisina kunaka apo mvura inotonhora yeKaribbean inosangana nejecha rePuerto Rican rinotsvoda zuva.
Iwe haufaniri kubhadhara kuti unakidzwe neEl Yunque . Hazvizoiti kuti iwe uwane mari yekusimudza mabhoti ako kubva kune imwe chete inotonhora mvura yehurumende muSouth National Forest System, kuti udzikise kushambidza kwako uye unyura mumvura inoputika, kana kutarisa "El Portal" yesango Vashanyi Center.
Zvisinei, iwe unofanirwa kusvika pano kuitira kuti uite zvinhu zvose izvi, uye ndiko kunoshandiswa mari. Kana uchida kubhadhara motokari kwezuva, rainforest ndeyako, uye ndeimwe yezvinofadza zvikuru nzira dzekushandisa zuva pachitsuwa.
The Ventana al Jazz , kana kuti "Window kuJazz," inofadza chiitiko chakasunungurwa chaHeineken, icho chiri kukurumidza kuva muvongi we Jazz muPuerto Rico. IHeineken Jazz Fest ndiyo gore rePuerto Rico ye jazzathon, uye inokwevera mamwe mazita akakurumbira mubhizinesi. Ventana al Jazz inotangira chiitiko ichi, chakaitwa musi weSvondo rapera wegore rimwe nerimwe paVotana al Mar park muCloado. Ndihwo manheru emararamiro ejaija anorarama pamwe chete nenziyo yemitambo yemafungu anononoka achiputika paConado beach.
San Juan Vavakidzani: Kutungamira kuCodado
Kudzokorora kweEl Jibarito Restaurant ku Old San Juan
Maziso Anozivikanwa: Vatambi vePuerto Rico
Best Honeymoon Destinations kuPuerto Rico
Nzira Dishanu Dzokufara muPuerto Rico paMvura Inonaya
Best Memvenirs From Oslo
Washington DC Annual Book Festivals uye Literary Events
Nzira Yekushandisa Kwayo Kentucky State Income Tax Return
Top Top Gay Bars muNashville
Mutambo weJazz weToronto: The Complete Guide
Zvikonzero Zvakanakisisa Zvokushanyira Los Angeles muChirungu
Stowe, Vermont Gay Ski Week
Nzira Yokuwana Nayo Volunteer Opportunities muCleveland
Tsvaga maStreean Wonders pasi peRoma
AVE Terein muSpain
Rwanda Rwendo Rwokufambisa: Inokosha Zvinhu uye Mashoko